Tesla Powerwall 2 bhatiri, chizvarwa chechipiri cheTesla mabhatiri | Green Renewables
Tomàs Bigardà | | Simba rekuchengetedza, Photovoltaic Solar Energy, Thermal zuva simba, Renewable simba, Nyowani matekinoroji
La Tesla Powerwall 2 Icho chizvarwa chechipiri cheinozivikanwa Tesla Powerwall bhatiri. Tesla mabhatiri awana chimwe chinhu chisingaite, tora kusvetukira kumberi neiyi nyowani modhi, zvakanyanya kuvandudza chimwe chinhu chaive chakatonaka kwazvo.
Powerwall inosangana nesimba rezuva kuti ubatanidze kuwanda kwezuva uye kudzikamisa kutsamira kwedu pane mafuta. Simba rezuva rinogona kuchengetwa mukati mehusiku uye rinoshandiswa husiku kusimbisa chero imba.
1 Tesla Powerwall 2, yakazara imba simba mhinduro
2 Zvakanakira iyo Tesla Powerwall 2 bhatiri
2.1 Wana zvakawanda kubva musimba rezuva
2.2 Iwe unogona kuwana rusununguko kubva kune yemagetsi grid
2.3 Chengetedza dzimba kupokana nemagetsi
2.4 Powerwall 2, bhatiri rinodhura kwazvo
2.5 Tarisa simba rako kubva chero kupi
3 Tesla Powerwall 2 mashandiro
3.1 Chirongwa cheTesla Powerwall 2 AC
3.2 Tesla Powerwall 2 DC inoshanda dhizaini
3.3 Tesla Powerwall 2 mune XNUMX-chikamu kuiswa
4 Tesla Powerwall 2 Bhatiri Rondedzero
5 Bhatiri Tesla Spain
6 Tesla Bhatiri Mutengo
7 Solar denga
7.1 Inowanikwa munguva pfupi
8 Iyo mbiru nhatu dzesimba dzinoshanduka
8.3 Muenzaniso 3
9 Tesla Bhatiri uye Royal Chirevo cheKuno-kushandisa
9.1 Royal Chirevo 900/2015
Tesla Powerwall 2, yakazara imba simba mhinduro
Iyo nyowani lithiamu-ion bhatiri repamba uye madiki mabhizinesi Tesla Powerwall 2 inopeta simba reyakatangira. Iyo yekutanga vhezheni ine yekuchengetedza inokwana 6,4 KW.
Inosanganisira zvakare ine simba inverter yemagetsi kushandura simba rakachengetwa mu DC (Direct Current) kuita simba rinobatsira mu AC (Alternating Current), kuti ugone kuishandisa mumba mese.
Iine kaviri kugona kwechizvarwa chekutanga, iyo Tesla Powerwall 2 inogona simba imba yepakati nepakati (2 kana matatu makamuri) kwezuva rose. Tinogona zvakare kusimbisa kukura kwayo komputa, kugona kuisira akati wandei mayuniti uye iyo inverter yakavakwa, inobvumira kuisirwa kuitwe zviri nyore chero kupi.
Zvakanakira iyo Tesla Powerwall 2 bhatiri
Wana zvakawanda kubva musimba rezuva
Kunyangwe mudzimba umo bhatiri-risina rezuva photovoltaic chizvarwa sisitimu yatovepo, chikamu chikuru chekugadzirwa kweiyo sisitimu inorasika kana ichidyiswa mugridhi kana haitorerwe, kana uchishandisa zero jekiseni mabasa.
NePowerwall 2 unogona kuchengeta kugadzirwa kwesolar system yako uye kuwana zvakanakisa kubva kumatanho ezuva, kugona kushandisa iro simba mukati chero nguvaKana masikati kana husiku.
Iwe unogona kuwana rusununguko kubva kune yemagetsi grid
Uchishandisa imwe kana maviri lithium mabhatiri Tesla Powerwall 2 uye nekuzvibatanidza ne photovoltaic simba rezuva, unogona kumisikidza imba yako pasina zvinoenderana neruzhinji giredhi remagetsi, nemari yegore inochengetwa zvinoreva izvi.
Chengetedza dzimba kupokana nemagetsi
Powerwall 2 inodzivirira imba yako pakubviswa magetsi, uye inobvumira mwenje nemidziyo yese kuti irambe ichishanda pasina dambudziko, kusvikira sevhisi yadzorerwa.
Powerwall 2, bhatiri rinodhura kwazvo
Uye zvakare, iyo Tesla Powerwall 2 bhatiri inopa yakanakisa mutengo pa kWh yekukwanisa pamusika, nokudaro kuchinjika kune yezuva nezuva simba zvinodiwa mudzimba zhinji, uye kudzikamisa yakatarwa simba remagetsi emagetsi akajairwa.
Powerwall inogadzikana zvizere sisitimu iri nyore kuisa uye isingade kuchengetedzwa
Tarisa simba rako kubva chero kupi
Neye Tesla app iwe unogona kudzora nyore nyore yako Powerwall, solar panels, kana yako Model S kana X, chero nguva, chero kupi.
Tesla Powerwall 2 mashandiro
Iyo Tesla Powerwall 2 bhatiri ichave neshanduro mbiri:
Tesla Powerwall 2 AC, ine inverter inosanganisirwa uye kubatanidza padivi re AC
Tesla Powerwall 2 DC, isina inverter uye inoenderana nejaja inverters yevanogadzira makuru (Solaredge, SMA, Fronius, nezvimwewo)
Chirongwa cheTesla Powerwall 2 AC
Mumufananidzo wapfuura, iwe unogona kuona dhizaini yeyakajairika mashandiro e tesla powerwall 2 bhatiri AC, Yakabatana neiyo photovoltaic chizvarwa system, pamwe neimba grid yekubatanidza inverter.
Mamita emagetsi akaisirwa kumucheto wemusoro (Tesla Energy Gateway) yemagetsi yekuisa mumba, inova nebasa rekuyera kana imba ichishandiswa vanoda simba kubva gridhi kana kwete. Inotarisawo simba rinobuda kugiridi, muchiitiko chekuti simba rinogadzirwa neiyo photovoltaic system yakakura kudarika iya inodiwa neimba panguva iyoyo.
Nenzira iyi, iyo Powerwall 2 bhatiri inochengetedza simba kana paine yakawandisa yekugadzira fotovoltaic kana inopa simba kuitira kuti mapaneru haakwanise kupa simba rese nesimba rinodikanwa neimba, senge pamazuva emhute kana husiku.
Iyi nzira yekushanda inoedza kutora mashoma mashoma anodiwa simba kubva kunetiweki, ichigadzira kuchengetedza kukuru nguva zhinji.
Tesla Powerwall 2 DC inoshanda dhizaini
Muenzaniso Powerwall 2 DC inoshanda yakananga yazvino, yakabatana senge yakasarudzika lead bhatiri, kune inoenderana inverter charger kana hybrid inverter (SMA, Fronius, Solaredge, nezvimwewo).
Uku kumisikidzwa kuchabvumidza kushanda nebhatiri reTesla Powerwall mumasisitimu ari ega, yakabatanidzwa padivi razvino parutivi, uye kwete chete mune grid-yakabatana kumisikidzwa, saka sarudzo zvinokuvadza inofungidzirwawo. Izvi zvinoreva kune rimwe divi kuti iyo wiring interface yeiyo Powerwall AC ichave yakasiyana neiyo DC vhezheni.
Tesla Powerwall 2 mune XNUMX-chikamu kuiswa
Tesla Powerwall 2 bhatiri inogona kushanda muzvikamu zvitatu-zvikamu paunenge uchishanda neatatu-chikamu ehybrid inverters, senge iyo Fronius Symo Hybrid.
Iyo Powerwall 2 haina kuburitsa matatu nhanho kuburitsa ikozvino, zvisinei inogona kuiswa mune matatu chikamu system nekuisa bhatiri reTesla mune chimwe chezvikamu. Bhatiri rinogona zvakare kuiswa muchikamu chimwe nechimwe kuti ipe simba rekuchengetedza muzvikamu zvese zvitatu.
Tesla Powerwall 2 Bhatiri Rondedzero
Capacity: 13,5 kWh
Kudzika kwekuyerera: 100%
Kubudirira: 90% yakazara kutenderera
Potencia: 7 kW yepamusoro / 5 kW inoenderera
Kuzvishandisa-wega nesimba rezuva
Kubhadharisa uchichinja nenguva yekushandisa
Kuzvimiririra kubva kune yemagetsi gridhi
Kukwanisika: Kusvikira ku9 Powerwall diki inogona kusunganidzwa muparutivi kupa simba kumisha yechero saizi.
Kushanda kwekushanda: -20 ° C kusvika 50 ° C
Vipimo: L x W x D: 1150mm x 755mm x 155mm
Weight: 120 makirogiramu
Kuiswa: Pasi kana kukwira madziro. Chivharo chayo chakasimba chinodzivirira pamvura kana guruva uye chichiitendera kuti iiswe mukati nekunze (IP67).
Chiratidzo: UL uye IEC zvitupa. Inoenderana nemirau yemagetsi network.
Chengetedzo: inodzivirirwa kubva kunjodzi yekubata. Hapana tambo dzakasununguka kana mahedheni.
Liquid firiji: Iyo yemvura yekupisa yekumisikidza system inogadzirisa mukati mekupisa kweiyo Powerwall yekuwedzera bhatiri mashandiro mune ese mamiriro ezvinhu.
Bhatiri Tesla Spain
La tesla bhatiri Powerwall 2 ichave ichiwanikwa muSpain muna 2017, kunyangwe zuva rekupedzisira kuburitsa risingazivikanwe. Iyo yekumisikidza inofanirwa kuitwa chete nevakaisirwa vanopupurirwa naTesla, kuve nechokwadi chakakwana mashandiro uye a 10 gore garandi nekusaita basa, ipapo, bhatiri rinotsiviwa zvachose mahara.
Tesla Bhatiri Mutengo
El Tesla Powerwall 2 bhatiri mutengo ndiwo mutengo unodhura kwazvo pa kWh yekukwanisa pamusika nhasi, kana tichiienzanisa nemutengo wevakwikwidzi vayo, senge LG Chem RESU kana iyo Axitec AXIStorage (kunyangwe izvi zvichipa mukana wekugona kushandiswa uri wega photovoltaic masystem pamwe neakanaka inverter charger, senge iyo SMA Sunny Island kana iyo Victron Multiplus kana Quattro). Mutengo waro unenge uripo ichave yakatenderedza € 6300, pamwe € 580 yekumisikidza.
Mari yeiyo yekutanga vhezheni yakachipa zvishoma, ingangoita 4.500 euros. Ngatisakanganwe kuti yakagadzirirwa kuwedzera photovoltaic solar system kuitira kuti, nepo magetsi ezuva ari kuburitsa, imba inodya yakananga kubva kwavari kana kana pasina chekushandisa, iri simba rinobhadharisa bhatiri reTesla.
Kana pasina mahwendefa chete asiri kushanda, imba inoshandisa simba rakachengetwa mubhatiri uye kana ichiri kuda yakawanda, inogona kubatanidza kune yakazara magetsi network uye inopedza. Iine iyo photovoltaic kuisirwa, mutengo weiyo turnkey chirongwa enda kusvika ku8.000 kana 9.000 euros. Mari iyi yaizobviswa pakati pemakore manomwe negumi
Asi kubheja kwaTesla hakusi pamabhatiri chete, asi pakugadzira mahwendefa anozadza aya mabhatiri nesimba. Mhinduro yakajeka yaElon Musk yaive yekugadzira anochinja-chinja rezuva ukomba kumatenga ese emhuri edzimba, ane chitarisiko chakangwara uye nemutengo wakaderera kupfuura akajairwa ndiro
Kana ari matenga ezuva, iwo akagadzirwa nematiles egirazi ane akasanganiswa maseru ezuva, saka anotaridzika senge aesthetic ("kana zvirinani" Elon Musk akavimbisa mune yake mharidzo) kupfuura zvakajairika matenga. Tile imwe neimwe ine yakasarudzika kudhinda, iyo inovapa chinenge chimiro chehunyanzvi uye nekudaro hapana matenga maviri achanyatsofanana.
Pamusoro pezvo, Tesla achaburitsa akati wandei akasiyana dhizaini kuti aenzanise chero dhizaini yemba. Uku ndiko kubatana pakati peSolarCity naTesla. Sekureva kwaElon Musk, "Isu takagadzira Tesla sekambani yemotokari yemagetsi, asi izvi zvese ndezvekuchinjisa shanduko kumagetsi emagetsi anovandudzwa."
Inowanikwa munguva pfupi
Kubudikidza newebhusaiti yekambani, vese avo vanoshuvira kuzviita vanogona kubata denga remhepo. Pakati penyika dzakasiyana siyana dzakasarudzwa naTesla kuisa denga rezuva kutengeswa kunosanganisira Spain, kupi dhipoziti ye930 euros ichafanirwa kuitwa kuchengetedza ichi chigadzirwa izvo hazvingasvike kusvika 2018.
Kana zvasvika kune mamodheru, Tesla yakangoburitsa maviri ayo mana mavhezheni edenga rezuva matiles: nhema girazi mataera mataira uye akaomeswa magirazi mataera Zvichakadaro, iyo toscana, vhezheni yakafanana neyakajairwa tile, uye iyo slate, ichauya muna 2018.
Iyo mbiru nhatu dzesimba dzinoshanduka
Musk akatsanangurawo kuti zviripo zvikamu zvitatu pakushandura kuva simba rezuva: chizvarwa (muchimiro chemasolar panels), kuchengetedza (mabhatiri) uye kutakura (mota dzemagetsi). Chinangwa chake ndechekuvhara matanho matatu nekambani yake Tesla.
Saka pfungwa yekujoinha mapaneru nemabhatiri. Kusvika parizvino, chero munhu aida kubheja pane simba rezuva uye kuita asina gidhi yemagetsi zvakanyanya sezvinobvira anotenga mapaneru kubva kune yechipiri kambani, uye mabhatiri kubva kuTesla. Kubva ikozvino zvichienda mberi, nhanho dzichava vanorerutsa zvakawanda, nekuti mapaneru nemabhatiri achauya pamwechete. Kana kune izvo isu tichiwedzera Tesla mota dzemagetsi uye chaja nyowani, isu tine akakwana 3 mu1. Pazasi tinogona kuona akasiyana mota mamodheru ayo kambani ine, kuitira kuti tiite iyo 3 mu1 yakurukurwa pamusoro.
El Tesla Model S Iwo masuo mashanu-emhando yepamusoro saloon. Yakatengeswa kubvira 2012, ine yakanyanya yepamusoro chiyero uye ndeyekutengesa kubudirira mukati nekunze kweUnited States. Yakashongedzerwa ne60, 75, 90 kana 100 kWh bhatiri pack, inodarika iyo Tesla Roadster mukuzvitonga, ichikwanisa kufamba anopfuura makiromita mazana mana pakati pemhosva. Injini inomhanya nechemberi ekisero uye mabhatiri akarara pasi. Mhedzisiro? Nzvimbo yepasi yegiravhiti kuitira kuti saloon inofamba nhambwe imwechete kubva mumugwagwa semota yemitambo. Iyo Tesla Muenzaniso S Inowanikwa mune maviri akasiyana traction masisitimu: kumashure uye mbiri mota mota-dzese. Kugadziriswa kwekupedzisira kunoshongedza mota pane ese maasi, inotariswa nedhijitari uye inodzorwa, iyo inobvumidza kukweva kwakaringana mune chero mamiriro. Iyo Tesla Model S inowedzera kugona kwebhatiri kurongedza ine aerodynamic dhizaini yemiyezo inoyerera ichibvumira kushomeka kushoma mumhepo kuyerera. Mukati, iyo 17-inch touchscreen iri kurova, yakakomberedzwa yakanangana nemutyairi uye inosanganisira ese masikati neusiku modes ekuvhiringidza-kusingaonekwe. Nzvimbo yega yega, upholstery uye sting zviyero zvine hunyanzvi hwekubata uye kutaridzika kwekunzwa, pamwe nekuremekedza nharaunda.
Tesla yakawedzera huwandu hwayo hwemagetsi emagetsi ne Tesla Muenzaniso X. Chimwe chezvinhu zvinonyanya kufadza mumota uye yemberi chiratidzo: mikova yekumashure inoshamisa iyo muTesla vakatumidza 'hawk mapapiro emasuo'. Mukati iwe unowana yakawanda nzvimbo uye anosvika matatu mitsara yezvigaro zvevanomwe vanokwira. Iyo ine 90 kWh bhatiri uye runyorwa rurefu rwemidziyo inosanganisira yekuzvimiririra yekupaka, inodziya zvigaro zveganda, masikati masikati anomhanya mwenje, otomatiki emergency braking, kupeta wechitatu mutsara wezvigaro, keyless kuwana uye otomatiki tailgate. Chimwe chezvinhu zvinonyanya kufarira zveTesla Model X ikemikari kana bhatani rekuchengetedza bhatani. Elon Musk anga achidada nekusimbisa kuti Tesla Model X ndiyo mota yekutanga pasirese yakagadzirirwa kemikari kana bhaisikopo kurwisa, nekuda kweiyo hombe mweya firita, kusvika kagumi kukunda iyo yeimwe mota yazvino. Izvi zvinozadzisa izvo mune zvakajairwa mamiriro, mukati meTesla Model X yemhepo mhando inowanikwa padanho rechero chipatara mukamuri. Mune iyo 'biological attack' maitiro, firita iyi inokwanisa kusefa mabhakitiriya kakapetwa ka300 pane akajairika, kakapetwa kanokwana mazana mashanu ma allergener, ka500 kusvibiswa kwezvakatipoteredza uye kusvika ka700 kanobudirira pakusefa hutachiona.
Mushure mekumirira kwenguva refu, Tesla Motors inopa iyo Tesla Model 3, Iyo inozove yechitatu nhengo yeiyo iripo Tesla renji. Yakagadzwa semhando inodhura kwazvo (iyo Model 3 ichatanga pamadhora zviuru makumi matatu nemazana mashanu muUnited States), inopa huwandu hunosvika makiromita mazana matatu, kuwedzera pakukwanisa kuita 35.000 kusvika 350 km / h mumasekondi asingasviki matanhatu. Iyi modhi inopedzisa iyo 'Master Plan' yaElon Musk naTesla, iyo yakatanga neTesla Roadster, yakafambira mberi neModel S, ndokukura ichisanganisa iyo Model X. Iyo Tesla Model 0 iri compact sedan (ine zviyero 100 metres pakureba. ) ine zvigaro zvishanu, 3% magetsi, ayo inovavarira kukwikwidza echinyakare premium sedans senge BMW 3 Series kana Audi A4. Kufanana nemamwe ese mamodheru ari muTesla renji, ichave iri tekinoroji yemhando yepamusoro, nekuti ichauya yakajairika ine Hardware ine yakazvimirira yekutyaira mashandiro uye kugona kukurumidza kuchaja.
Tesla Bhatiri uye Royal Chirevo cheKuno-kushandisa
Nehurombo, Spain inotambura nemutemo wakaipisisa weKuzvishandisa-wega pasirese. Mukurumbira "mutero wezuva”Kubviswa kwerudzi urwu rwechivakwa kuri kutadzisa, nepo kune dzimwe nyika kukura kwayo kusingamiswe.
Royal Chirevo 900/2015
El Royal Chirevo 900/2015 zvakagumisa "zvisiri pamutemo" zvezvivakwa zvekuzvishandisa, zvichitsanangura mamiriro ehunyanzvi nehutongi kuti vakwanise kuvanyoresa zviri pamutemo.
Nekudaro, chaizvo mamwe eaya ehunyanzvi-manejimendi mamiriro, senge chisungo chekuisa mita yechipiri uye maitiro anofanirwa kuitwa nekambani yekuparadzira inoita kuti kuita kwepamutemo kudhure, kuomesa zvakanyanya uye kunonoka, kudzivirira uye kuodza moyo nzvimbo dzekuzvishandisa.
Kana kune izvi zvese tinowedzera mutero pazuva, unova mubhadharo wesimba rakagadzirwa, iro chete kuiswa mudzimba kana munzvimbo dzine magetsi emagetsi asingasviki 10kW chikamu chimwe chete chinosunungurwa kwenguva pfupi, iyo disincentive yakazara.
Uye zvakare, kuiswa kunoshandisa kuwanda mumabhatiri, senge bhatiri Tesla Powerwall 2, chirevo ichi chinovachajawo nemari yakatarwa inoenderana nesimba, pfungwa iyi haina kudhura zvakanyanya, asi inobhadharisa uye inokanganisa zvivakwa zvemagetsi zvekuzvigadzirira.
Chero zvazvingaitika, nhau dzakanaka ndedzekuti Chirevo cheMutemo wekusimudzira Kuzvishandisa pachako parizvino kuri kuongororwa muCongress of DeputiesIsu hatisati taziva kana zvichabudirira, sezvo Hurumende yakavhotesa chikumbiro ichi. Ciudadanos, panguva imwechete anosimudzira chikumbiro uye rutsigiro rweHurumende muvhoti, iri kufunga nhasi kuti ichengete veto here kana kuti ichisimudzwa, zvinoenderana nekutaurirana kuri kuitwa nebazi rezveindasitiri.
Kana zano rikaenderera mberi, vangangobvisa zvipingamupinyi zvikuru mukusimudzira kweKuzvishandisa-wega munyika medu, kubva pachirevo RD900 / 2015: kudiwa kwe yechipiri pakaunda, mashandiro ane muparidzi nemitero yakamisikidzwa uye inoshanduka, mutero wezuva unozivikanwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Renewable simba » Tesla Powerwall 2 Bhatiri
Yolanda Guzman akadaro
Kwaziso: Ini ndoda kutenga Tesla 2 bhatiri kune 12KW Inverter. Ini handinzwisise kana imwe yakwana kana dai ndaizofanira kusanganisa maviri.
Chii chinonzi Kutumira kuPuerto Rico?
Pindura Yolanda Guzmán
Bayguel Baldiviezo akadaro
Inonyanya kufadza .. !!
Pindura Bayguel Baldiviezo
ANTONIO ZAVALA akadaro
KUMWE KANA KANA ZVIMWE ZVIMWE BHATARI ZVINODIWA KUTI CHITUNGWA CHINODIWA CHEMA12 KW, UNE MAPANHARA ESOLAR, CHINOTarisirwa KUTI KUBVISA KUSANGANISWA KWECFE UYE KUSHANDA NEMAPABHARA NEMA BHATARI KUGADZIRA IYO Magetsi.
Pindura ANTONIO ZAVALA
Chii chinonzi geothermal energy, emhepo mamiriro masisitimu uye ramangwana